Fikarohana momba ny firaisana Drafitrasa fanahy, fampidiran-tena mitovy amin'ny fianakaviana sy firotsahan'ny fanahy amin'ny tantara taloha momba ny fiainana Kalevi Paasio | Paavo Sorsa - Fikarohana Reincarnation
Risto Mamono ny zanany lahy, Kalevi
Kalevi Paasio dia teraka tamin'ny 11 1987 tamin'ny XNUMX, any Ylojarvi, Failandy, akaikin'i Tampere. Ny reniny dia nantsoina hoe Sylvi sy ny rainy, izay nantsoina hoe Risto, dia nanana herim-po mahery vaika. Tsy maintsy niantso ny polisy i Sylvi, indraindray rehefa nodarohany an'i Risto izy.
Noho ny fanararaotana ara-batana, i Sylvi dia nisaraka tamin'i Risto, na dia nitazona zo ho an'i Kalevi zanany aza izy. Rehefa naka an'i Kalevi nandritra ny faran'ny herinandro i Risto dia namono ny zanany lahy izy. Niaiky i Risto fa niditra an-katezerana izy, nanafika ny zanany tamin'ny fomba maro ary tamin'ny farany, dia namely ny zanany lahy tamin'ny lohany inefatra tamin'ny hazo fisaka. Ny famonoana dia nitranga tamin'ny volana 11, 1990. Nosamborina i Risto, voaheloka ary namono tena tany am-ponja.
Kalevi Miseho amin'ny maha-Fanahy Azy
Volana vitsy taorian'ny nahafatesan'i Kalevi, ny reniny, Sylvi dia nanana nofy izay tena nisy marina ka tsy fantany raha nofy na zava-misy. Tsy nanana nofinofisiny mihitsy izy taloha.
Tao amin'ny nofiny dia nandre ny peratra volamena i Sylvi. Rehefa nanokatra ny varavarana izy dia teo i Kalevi sy i Risto. Risto dia nijanona fa i Kalevi kosa niditra tao an-trano ary nipetraka teo am-baravarankely iray. Ian Stevenson nanoratra hoe:
"Nitady hikasika azy i Sylvi ary nahita fa nandeha namakivaky azy ny tanany." (1)
Tamin'izany fotoana izany dia niaina niaraka tamin'ny lehilahy iray atao hoe Veikko Sorsa i Sylvi. Nipetraka tany amin'ny tanàna hafa izy ireo rehefa nanambady an'i Risto i Sylvi. Tsy ela taorian'ny nahaterahan'i Sylvi an'i Kalevi, dia bevohoka izy. Nivady izy sy Veikko taorian'izay ary ny zanak'izy ireo, Paavo, dia teraka kely noho ny 13 volana taorian'ny nahafatesan'i Kalevi.
Paavo Tadiavina any amin'ny fiainany taloha
Raha nihaona tamin'ny 3 taona i Paavo, dia nilalao niaraka tamin'ny baomba teo ivelan'ny tranony izy. Rehefa nantsoina niditra izy, dia tsy nety niditra tao an-trano. Nilaza i Paavo fa tsy trano ity ary te handeha any amin'ny "tranony" izy. (2)
Mampahatsiahy ny tranga izany Anne Frank | Barbro Karlen, izay nilazan'i Barbro tamin'ny ray aman-dreniny fa manana trano hafa izy ary tsy ho ela ny ray aman-dreniny dia haka azy.
Paavo Mahatsiaro ny fifandonana teo amin'ny fiainan'ny reniny sy ny volany mba hiarovana azy
Indray mandeha i Paavo dia nahita sary izay nalain'ny polisin'i Sylvi taorian'ny namelezan'i Risto azy. Rehefa nahita an'io sary io i Paavo, dia nanomboka nihiaka mafy ary nilaza tamin'i Sylvi hoe:
"Tsy misy olona avela hikapoka anao." (3)
Ian Stevenson dia nanasongadina fa mety ho noho ny fahalavoana na ny loza hafa ny saka izay nalain'i Svyli teo amin'ny sary. Nanaitra i Stevenson fa toa tsy nahalala i Paavo fa avy amin'ny fanararaotana ara-batana ireo mangana.
Ian Stevenson dia nanamarika ihany koa fa i Paavo dia mifamatotra amin'ny Sylvi. Nifandray bebe kokoa tamin'i Sylvi izy ary te-handany fotoana bebe kokoa mihoatra noho ireo zandriny.
Paavo Claims Sary avy amin'i Kalevi avy aminy
Rehefa nahita ny sarin'i Kalevi i Paavo, dia nanambara izy fa sary azy. Stevenson dia nanamarika fa sahiran-tsaina i Kalevi fa sary avy amin'ny ankizy hafa izany.
Reincarnation sy fitoviana amin'ny fisehoan'ny vatana
Nisy ny fisehoan-javatra iray miavaka teo anelanelan'i Paavo sy Kalevi, izay nahatonga ny olona hieritreritra fa ireo ray aman-dreny ireo dia samy nanana ny rainy. Mazava ho azy fa ny rain'i Paavo dia i Risto, raha i Veikko kosa rain'i Kalevi.
Ny drafitry ny fanahy ho amin'ny fiainana andavanandro sy ny fanambadian'ny zokiolona ao an-tokantrano: Ny fanahin'i Kalevi dia afaka nikasa ny hanana nofo nofo avy tamin'ny tontolon'ny fanahy izay nahaterahany tamin'ny reniny taloha. Toa ity fiainana faharoa ity dia nateraky ny firaiketan'i Kalevi tamin'i Sylvi reniny sy ny faniriany hiaro azy.
Ny Fanahy Mitarika: Nanana fanambarana fanambarana i Sylvi, izay tena izy marina tsy fantany raha nofy izany na tsia. Tao anatin'io nofy io i Kalevi dia nanatona azy ary nipetraka teo am-baravarankeliny. Fotoana fohy taorian'izay, dia bevohoka tamin'i Paavo i Sylvi, izay toa fahaterahana indray ny Kalevi. Raha marina izany, dia afaka mifandray amin'ny reniny avy amin'ny tontolon'ny fanahy i Kalevi.
Fitoviana ara-batana: Notsongaina fa i Paavo dia sahala amin'ny Kalevi izay heverin'ny olona fa izy ireo ihany no ray. Kalevi sy Paavo dia samy nanana raim-pianakaviana samihafa, fa ilay reny iray ihany, izay mbola fototarazo ihany no afaka mamaritra ny fijerin'izy ireo.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 150
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 150
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 150